दलितले उत्पादन गरेको दुध बिकेन, मलखादमा फाल्दै ! « News of Nepal
दलितले उत्पादन गरेको दुध बिकेन, मलखादमा फाल्दै !
१० माघ २०७४, बुधबार
सिर्जना पन्त, बागलुङ । बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–२ साबिक भिमापोखरा गाविसका दलित किसानहरुले उत्पादन गरेको दुघ विक्रि नभएपछि चिन्तीत बनेका छन् । आफुहरुले उत्पादन गरेको दुघ र दुधजन्य सामाग्रही विक्रि नभएपछि उनिहरु चिन्तित बनेका हुन् ।
भिमपोखराका ४२ बर्षका चिन्तामणी सुनारले दुईवटा भैसी पाल्नुभएको छ । गाउँमै दुग्ध सहकारी भएपनि दलित भनेर दुघ सहकारीले लिन नमानेपछि उहाँले दुघबाट घिउ बनाएर मोही मलखादमा फाल्दै आउँनुभएको छ । तर दलित भएकै कारण उहाँले उत्पादन गरेको घिउँ पनि विक्रि नहुँदा उहाँलाई चिन्ताले सताएको छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ् ‘दलितका दुध गाउँमा चलाउन गाह्रो हुन्छ भनेर सहकारीले हाम्रो दुध मिसाउदैँन’ हाम्रो दुध पनि मिसाईदिए छोराछोरीले कापी कलम किन्थे, नुन चिनि किन्न समस्या हुनिथिएन ।’ गाउँका मानिसहरुले दुध विक्रि गरेर १० हजार कमाए भनेर सुनाउँदा पनि उनको मन अमिलो हुन्छ । ‘गाईबस्तु पालौँ भने दुध विक्दैन, ज्याला मजदुरी र खेतीपाती गर्नुको अरु विकल्प छैन’ भन्दै उहाँ भन्नुहुन्छ ‘अरुले जस्तै गरी दुध विक्रि गर्न पाए व्यवसायिक रुपमै पशुपालन गर्ने ठुलो चाहना छ’ ।
चिन्तामणी जस्तै भिमपोखरामा कयौँ घरपरिवारहरुले उत्पादन गरेका दुध विक्रि गर्न नपाउदा भित्र भित्रै तड्पन्छन् तर उनीहरुको इच्छा कहिलै पुरा नहुने बताउछन् । त्यस ठाउँमा रहेको एक सहकारीमा बारम्बार दुध मिसाउन पाउनुपर्छ भनी आन्दोलन गरेपनि सहकारीमा भएका २ जनाको शेयर समेत निकालिदिएको गुनासो गर्छन् ।
सोही गाउँकी कुमारी बिकले बारम्बारको प्रयास बिफल भएपछि अहिले मिसाउनका लागि प्रयत्न गर्नै छाडेको बताउँनुभयो । उहाँले तरकारी, बाख्रा, कुखुरा पाले मात्रै आम्दानी हुने भन्दै दुध बेचेर घरखर्च चलाउने बिषय सपना मात्रै भएको बताउँनुभयो । बजार टाढा भएकाले डोकोमा बोकेर लैजान नसकिने भएकाले अहिले घरमा उत्पादन गरेको दुध खेर गैरहेको बताउँनुभयो । त्यहाका झण्डै २५ घरधुरीले अहिले दुध विक्रि गर्न नपाएको बताएका छन् ।
उनीहरु जस्तै नेपालका धेरै स्थानका दलित समुदाय अझै पनि विभेद खेप्न बाध्य छन् । काठेखोला गाउँपालिका वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष विद्यापति शर्माले गरिब, विपन्न तथा आयआर्जन कम भएकाहरुको आयस्तर बढाउनका लागि सहकारी भएकाले दलित समुदायलाई समावेश गराउनका लागि प्रयत्न गर्ने बताउनुभयो । उहाँले बुझाई तथा चेतना कम भएका व्यक्तिले विभेद गरेको हुन सक्दै भन्दै विभेद अन्त्य गर्न सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
अमृत दुग्ध सहकारी संस्था भिमपोखराका अध्यक्ष खगराज पौडेलले भने विभेद गरेर नभई दुध उत्पादन नगरेका कारण नमिसाएको बताउँनुहुन्छ । उहाँले सहकारीको साधारणसभामा शेयर खुल्ला गरेर सबै समुदायको दुध मिसाउने गरी तयारी थालेको समेत बताउनुभएको छ ।
प्रदेश सांसद दीपक मनाङे पक्राउ
प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र हिब्रु लेखक संघबीच हस्ताक्षर
प्रहरी कार्यालय लमजुङको नयाँ भवन शिलान्यास
प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनका लागि महायज्ञ
बिहादीमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको तयारी
कांग्रेसको विवाद मिल्यो: सोमबार केन्द्रिय समिति बैठक बस्दै
छाउ बार्ने र बार्न लगाउनेलाई सामूहिक..
मोरङको केराबारी गाउँपालिका कार्यालयमा बम विष्फोट
सालको काठसहित गाडी नियन्त्रणमा
कराते प्रशिक्षक महर्जन सम्मानित
सेनाको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा ४१५ नागरिकको उपचार
भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी पाल्पामा दुईवटा महोत्सव हुने